Oge Plex.Earth Time na-enye ndị ọkachamara AEC ihe onyonyo kachasị ọhụrụ n'ime AutoCAD - Geofumadas
Plex.Earth Oge nyocha na-enye ndị ọkachamara AEC ihe ngosi satịlaịtị kachasị ọhụrụ n'ime AutoCAD
Nọvemba, 2019 AutoCAD-AutoDesk, innovations
Plexscape, ndị mmepe nke Plex.Earth®, otu n'ime ngwaọrụ kachasị ewu ewu maka AutoCAD maka ngwangwa ihe owuwu, injinia na ihe owuwu (AEC), bidoro Oge nyocha ™, ọrụ pụrụ iche na ahịa AEC zuru ụwa ọnụ, nke na-eme ka Ihe onyonyo satịlaịtị emelitere kachasị ọnụ ma dị mfe inweta n'ime AutoCAD.
N’iso usoro mmekọrịta na Bird.i, ụlọ ọrụ na-ejikọ ihe onyonyo ọhụụ na ọgụgụ isi iji mepụta ozi bara uru, Plex.Earth Oge A na-emeghe ohere iji nweta ihe ngosi satịlaịtị na nso nso a nke ndị na-eweta satịlaịtị azụmahịa ụwa. Teknụzụ / DigitalGlobe, Airbus na Planet: anyị na-ewetara usoro ọnụahịa pụrụ iche: ọkachamara ọ bụla nke AEC nwere ike ịnweta ohere ntanetị nke oge a na-akparaghị ókè maka atụmatụ ka mma site na ntinye ọnụ kwa ọnwa ma ọ bụ kwa afọ Plex.Earth.
Ruo taa, iji ihe ngosi satịlaịtị azụmaahịa riri oke ụgwọ, igbu oge dị oke mkpa na ihe achọrọ maka ahụmịhe ụfọdụ iji hazie ma nyochaa data ahụ. Na mgbakwunye, foto satịlaịtị na-abụkarị ihe nkenke, nke adịghị mma ma anaghị enyekarị ikike zuru ezu maka iji azụmaahịa ma ọ bụ ịmepụta ọrụ nke usoro. Drones na ọmụmụ ala, n'aka nke ọzọ, chọrọ ọnụnọ na saịtị ahụ, nke na-eduga na igbu oge na ọnụahịa nke mkpokọta akụrụngwa ahụ, na-agbaso mmachibido ndị ọzọ enwere ike (ihu igwe na-ekwesịghị ekwesị, mpaghara ụgbọ elu na-enweghị drones, wdg) .
Plex.Earth Oge nyocha na-eme ka njedebe ndị a kwụsị site na ịme ka ndị mmadụ nweta ohere ị nweta oyuyo satịlaịtị emelitere na elu nke AutoCAD, n'oge na-adịghịkwa anya na nyiwe CAD ndị ọzọ. Site na ịnweta ngwanrọ na ntanetị dị mfe maka data satịlaịtị, ndị ọkachamara AEC nwere ike ịnwe elele kachasị ọhụrụ maka mpaghara ebe ha ga-elekwasị anya iji ghọta mpaghara oru ngo ha nke ọma, na-eme mkpebi mara ma zere mmejọ dị oke ọnụ, site na mbido usoro nhazi ahụ.
Na mgbakwunye, Oge nyocha na-enye ohere ụlọ ọrụ nke nha ọ bụla iji nyochaa ọganihu nke ọrụ ha na-aga n'ihu (yana nke asọmpi ahụ), lee otu mpaghara mmasị si na-agafe oge ma ọ bụ chọpụta mmetụta ọdachi na-emere onwe ya na saịtị ọrụ. .
"Afọ iri gara aga, dị ka injinia obodo, anwalere m ụgwọ ezi ọrụ nke nrụgharị, nke dugara m n'ịmepụta ngwa ọrụ nwere njikọ AutoCAD na Google Earth," Lambros Kaliakatsos, onye nchoputa na CEO nke Plexscape kwuru. Ugbu a, Plex.Earth nọ n'ọgbọ nke anọ, ọhụụ anyị ka dịkwa otu: iji kpochapụ mkpa nke ndị injinia ga-edozi na saịtị ahụ maka atụmatụ echiche na nke mbụ nke ọrụ ha. Oge nlere ™, ọrụ ọhụụ anyị, bụ nzọụkwụ karịrị ebumnuche a, ebe ọ na-emepe ohere maka oge mbụ iji gbochie mmadụ niile ị nweta ihe osise satịlaịtị kachasị ọhụrụ na ụwa na nghọta bara uru ha na-enye.
Plexscape bụ ụlọ ọrụ ngwanrọ raara onwe ya nye ịgbanwe ụzọ ndị injinia si arụ ọrụ na ọrụ owuwu, injinịa na ihe owuwu (AEC), site na mmepe nke ụzọ amamịghe ọhụụ nke na-emechi oghere dị n’etiti imewe na ezigbo ụwa.
Plex.Earth, ngwaahịa anyị bụ flagship, bụ sọftụwia izizi nke emere na CAD ahịa na otu n'ime ngwaọrụ ndị ama ama na Autodesk App Store. Ihe ngwọta anyị, nke ebuputara na 2009, ka ọtụtụ puku ndị injinia na-eji ihe karịrị mba 120 gburugburu ụwa, na-enyere ha aka inwe echiche 3D zuru oke nke saịtị saịtị ha ezigbo ụwa na nkeji, site site na Google Earth, Maapụ Bing na ọrụ nkewa ndị ọzọ. ma na-eduga ndị na-ahụ maka ọrụ satellite (Maxar Teknụzụ / DigitalGlobe, Airbus na Planet).
Iji mụtakwuo maka uru nke Plex.Earth, nleta www.plexearth.com
Next Post AulaGEO, ihe kachasị mma maka enyem maka ndị ọrụ injiniaNext »